Sebtember 2017 ayaa weli ah bil masiibooyin dabiici ah oo waaweyn | Saadaasha Shabakadda
Maaha wax aan caadi ahayn bil in lala socdo aafo dabiici ah. Duufaan, dhulgariir, laga yaabee xoogaa qarxin ah. Laakiin baaxadda aafooyinka iyo dhacdooyinkii dhacay bishii Sebtember 2017, ayaa nooga tagay sawirro badan, warar iyo fiidiyowyo istaahila in dib loo eego.
Marka maanta, waxaan u hibeyn doonnaa qoraalkan, innagoo taxayno qaar ka mid ah ifafaalooyinkii waaya-aragnimada lahaa. Kuwa ugu transcenders waana kuwa adduunka ka yaabiyay. Su'aalaha ku saabsan, haddii ay xiriir la yeelan doonaan, haddii midkoodna uu u xagliyay qof kale, iyo doorka ay qorraxda ama isbeddelka cimiladu lahaan karaan ... Waa wax laga yaabo inay xitaa ku kala duwanaan karaan hadba isha aad fiiriso. Qof waliba xor buu u yahay inuu gunaanadkiisa gaaro.
3 Duufaanta Maria
4 2 Dhulgariirkii Mexico
5 Qarax fulkaanaha Popocatepetl
6 Duufaan Talim
7 Nalalka Cadceeda
8 Fulkaanaha Agung, Bali, Indonesia
Wuxuu bilaabmay Agoosto 17 wuxuuna dhamaaday 3 Sebtember. Marka la fiiriyo dhawaanshihiisa bisha iyo muhiimadda ay laheyd, waan ku darnay. Ku saabsan dabeylaha ugu badan 215km / saacaddii. Waxay sababtay 60 dhimasho iyo khasaara dhaqaale oo gaadhay 25.000 milyan oo dollar. Saameyntiisa weyn waxay ku yeelatay Bariga Caribbean-ka iyo Mareykanka.
Wuxuu asal ahaan soobaxay Agoosto 30 wuxuuna socday ilaa 15-kii Sebtember. Mid ka mid ah duufaannadii ugu xoogga badnaa isla markaana jabiyay diiwaanno taariikhi ah. Irma waxay ka mid ahayd masiibooyinkii ugu darnaa bishan. Dabaylaha ugu badan ee 295km / saacaddii, 127 dhimasho iyo khasaara dhaqaale oo gaadhay 118.000 milyan oo dollar. Kariibiyaanka leh yarta Antilles, Puerto Rico, jasiiradda Hispaniola, Cuba, iyo Mareykanka oo leh Florida ayaa ka gudubtay dhamaadka ilaa dhamaadka.
Laga bilaabo Sebtember 15 ilaa Oktoobar 1. Waxay lahayd dabaylo ugu badnaan 280km / saacaddii, 243 dhimasho iyo dhaawaca dhaqaale ee gaaraya 75.000 milyan oo yuuro. Duufaantaan waxay sababtay dhimasho ka badan labada kale ee la isku daray, waxayna gaartay meelo badan oo aad u saamaynaya sida Puerto Rico, Jasiiradaha Windward, Dominica, Martinique. Wuxuu sidoo kale soo maray dhulal ka soo kabanaayay duufaantii hore, oo aan neef qabatin lahayn, ayuu aakhirkii burburiyay aagaggii.
2 Dhulgariirkii Mexico
Habeenkii Sebtember 7, dhulgariir ka dhacay 8,2 cabirka badweynta Baasifiga ee Gobolka Chiapas iyadoo dhowr iyo toban dhimasho ah, xudunta dhulgariirku wuxuu 133km ujiray Pijijiapan. Iyo Oktoobar 19-ka Bartamaha Mexico wuxuu ku dhuftay dhulgariir cabirkiisu yahay 7,1. Ilaa hadda, in ka badan 360 dhimasho ayaa durba lagu daray iyadoo tirooyinku ay sii kordhayaan, oo 220 ka mid ahi ay ahaayeen Mexico City lafteeda. Iyadoo la tixgelinayo labada dhulgariir, tirada ayaa gaartay 400 dhintay.
Qarax fulkaanaha Popocatepetl
In kasta oo bulshada khubarada ahi shaki ka muujiyeen in dhulgariirradii xoogga badnaa ee Mexico ay la xiriireen qarxinta, haddana ugu dambeyn waa la diiday. Mar labaad, Mexico waxay ahayd halyeeyada sheeko kale oo ka timid Hooyo Dabeecad. Popocatepetl, si joogto ah ayey u qarxaysay bishii Sebtember. Dhamaadka bisha waxay bilowday inay soo saarto walxo dab ah.
In kasta oo aan in badan laga dhawaajin, haddana waxay ahayd dhacdo kale oo dabaylo waaweyn ka dhacday Japan. Iyadoo ay taasi jirto ayaan waxaan ku qornay warbixin isaga ku saabsan baloogga Sebtember 17-keedii. Waxay ku qasabtay daad gureynta in ka badan 640.000 oo qof. Isku dheelitirnaantii ugu dambeysay ee aadanaha waxaa lagu soo oogay dhibbane dhintay iyo 42 dhaawacmay. Marka laga soo tago daadadka aan la tirin karin ee lagu arkay aagga.
Dhul Magnetka Dhulka
Waxaa ka mid ah dhowr dab oo dhacay bishii oo dhan, maalintii Sebtember 6 iyo 10 Qorraxdu waxay soo saartay ugu naxdinta badneyd tobankii sano ee la soo dhaafay. Waxaa jiray dhowr guuldarooyin ah GPS iyo calaamadaha raadiyaha. Marka laga reebo aag magnetka dhulka ah oo si xoog leh loo garaacay. Qiiqa ka baxa wuxuu ahaa 1000 km halkii ilbidhiqsi ee xiddigta. Duufaanta magnetic ayaa timid saameyn ku yeelashada iyo xitaa diiwaangelinta xawaaraha ilaa 700 km ilbiriqsi kasta.
Fulkaanaha Agung, Bali, Indonesia
Heerka feejignaanta ee fulkaanaha ayaa kordhay bishii Sebtember oo dhan. 20-keedii waxaa jiray 12.000 oo daad gureyn ah. 26-keedii dadka la daad gureeyay waxay ahaayeen 75.000 kadib dhaqdhaqaaq dhul gariir taas oo la diiwaangelinayay, gacan ka kooban 12km. Aaggan, oo qaata 200.000 oo dalxiisayaal ah bishii, ayaa horeba u lahaa saamaynta Agung sanadkii 1963. Qaraxyadu waxay socdeen ku dhowaad sannad, waxaana ku dhintay 1.100 qof.
Waxaan ku sagootinay bishaan Sebtember, halkaasoo dabeecadda ay reebtay raadkeeda weyn, qoysas iyo aagag fara badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Sebtember 2017 ayaa weli ah bil masiibooyin dabiici ah oo waaweyn
Waad salaaman tahay. Macluumaadka ku jira bartaada ayaa aad u xiiso badan. Kaliya waxaan hayaa hal cadeyn ah: dhulgariirkii ka dhacay Magaalada Mexico wuxuu ahaa Sebtember 19, 2017 ee ma ahan Oktoobar 19. Salaan.
Jawaab Leticia Coronado